चङ्खेली गाउँपालिकामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद ! - नेपालबहस
चङ्खेली गाउँपालिकामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद !
हुम्ला । दक्षिण क्षेत्रमा रहेको चङ्खेली गाउँपालिकामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ । असार पहिलो हप्ता चङ्खेली गाउँपालिका–३ मेल्छाममा रहेको टेलिफोन टावरमा समस्या आउँदा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
टेलिफोन सेवा पुनः सञ्चालन नहुँदा मेल्छाम, दार्मा, सर्केगाडलगायतका बासिन्दा सञ्चारबाट विच्छेद भएका छन् । टेलिफोन गर्नका लागि दुई घण्टाको पैदल हिँडेर अर्को गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धनलाल चौलागाईले बताए।
टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरोकारवाला उदासीन भएको स्थानीय वडा नं ३ का सपना ऐडीले गुनासो गरे । नेपाल टेलिकम शाखा हुम्लाका प्रमुख शिवप्रसाद भट्टराईले नेपालगञ्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट टेलिफोन मर्मतका लागि प्राविधिकको टोली आउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्राविधिक टोली आएर मर्मत गरेपछि मात्रै सेवा सञ्चालन हुने भएकाले अझै केही दिन सञ्चारमा कठिनाइ हुनसक्ने उनले बताए ।
फोन गर्न दुई घण्टा पैदल
अघिल्लो लेखनेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पर्यटकको सुरक्षा आवश्यक : परिसर प्रमुख सुवेदी
अर्को लेखनेकपा संसदीय दल बैठक : राष्ट्रिय नीति नै बनाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव